एल्युमिनियम वा एल्युमिनियम? त्यहाँ दुइटा नामहरू छन्
एल्युमिनियम वा एल्युमिनियम?
किन तत्वको लागि दुई नामहरू छन् 13
आवधिक तालिकामा तत्व 13 को लागि एल्युमिनियम र एल्युमिनियम दुई नामहरू छन्। दुवै अवस्थामा, तत्व प्रतीक अल हो, यद्यपि अमेरिकी र क्यानाडाहरू जादू गर्छन् र नाम एल्युमिनियममा राख्छन्, जबकि ब्रिटिश (र बाँकी अधिकांश संसार) एल्युमिनियमको हिज्जे र उच्चारण प्रयोग गर्छन्।
त्यहाँ दुइटा नामहरू छन्?
तपाईं तत्व को खोजकर्ता दोषी गर्न सक्नुहुन्छ, सर हम्मिरी डेभी , वेबस्टरको शब्दकोश, वा शुद्ध र एप्लाइड रसायन (IUPAC) को अन्तर्राष्ट्रिय संघ ।
सर हम्मिरी डेभीले उनको नाम 1812 पुस्तक एन्ट्स रासायनिक फिलिस्कोमा तत्त्वको उल्लेख गर्दा एल्युमिनियमलाई प्रस्ताव गरे, यद्यपि उहाँले तत्व (1808) को लागि एल्युमिनियम प्रयोग गर्नुभएको थियो। डेभीको दुई नामहरूको बावजूद, अधिकतर तत्वहरूको -ium नामको साथमा आधिकारिक नाम "एल्युमिनियम" को लागी अपनाईएको थियो। 1828 वेबसास्टरको शब्दकोशले "एल्युमिनियम" हिज्जे प्रयोग गर्यो, जुन पछिका संस्करणहरूमा राखिएको थियो। 1925 मा अमेरिकी रासायनिक सोसाइटी (एसीएस) ले एल्यूमिनियम फिर्ता मूल एल्युमिनियममा जाने निर्णय गरे, संयुक्त राज्य अमेरिका "एल्युमिनियम" समूहमा राखे। हालैका वर्षहरूमा, IUPAC ले उचित हिज्जेको रूपमा "एल्युमिनियम" को पहिचान गरेको थियो, तर यो उत्तरी अमेरिकामा पुग्न सकेन किनभने एसीएसले एल्युमिनियम प्रयोग गरे। आईओपीएसी आवधिक तालिकामा हालै हिज्जेहरू सूचीबद्ध छन् र दुवै शब्दहरू पूर्ण रूपमा स्वीकार्य छन्।
एल्युमिनियम-एल्युमिनियम इतिहासको बारेमा थप
अझै उलङ्ग यहाँ एल्युमिनियमको नामकरण र खोजको बारेमा एकदम बढी छ।
ग्वाटोन डे मोरभाउ (1761) नामक एल्यूम भनिन्छ, जो एक नाम हो जुन प्राचीन युनानी र रोमीहरूलाई चिनिन्थ्यो। 1808 मा, हेफ्री डेवीले अल्ट्रामा धातुको अस्तित्वलाई चिन्न थाले, जसमा उनले पहिले एल्युमिनियम र पछि एल्युमिनियम नाम गरे। डेभीलाई थाहा थियो एल्यूमिनियम अस्तित्वमा थियो, तर उहाँले तत्वलाई अलग गर्नुभएन।
फ्रिड्रिच वाहोलरले 1827 मा एल्डीड्रस एल्युमिनियम क्लोराइडलाई पोटेशियमसँग मिलाएर एल्युमिनियमलाई अलग पारेको छ। वास्तवमा, यद्यपि, धातु दुई वर्ष पहिले उत्पादन गरिएको थियो, तथापि, डेनिश भौतिकी र रसायनज्ञ हन्स क्रिश्चियन द्वारा। तपाईंको स्रोतको आधारमा, एल्युमिनियमको खोजमा यार्स्ट वा वाहलरलाई श्रेय दिइएको छ। एक तत्वलाई छुने व्यक्तिले यसलाई नामकरण गर्ने सुअवसर पाउँछ, तर अन्वेषकको पहिचान नामको रूपमा विवाद भएको छ!
कुन कुरा ठीक छ - एल्युमिनियम वा एल्युमिनियम?
IUPAC ले या त हिज्जेलाई सही छ र स्वीकार्य छ। तथापि, उत्तरी अमेरिकामा स्वीकृत हिज्जे एल्युमिनियम हो, जबकि स्वीकार गरिएको हिज्जे केवल सबै ठाउँको बारेमा अरु एल्युमिनियम हो।
तत्व 13 नामकरण कुञ्जी बिन्दुहरू
तत्व परमाणु संख्या 13 को प्रतीक अल र या त नाम एल्यूमीनियम या एल्यूमीनियम छ।
एल्युमिनियम संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रयोग गरिएको तत्व नाम हो। एल्युमिनियम विश्वभरका अन्य मनपर्ने वर्तनी हो।
IUPAC ले हिज्जे वा स्वीकार गर्दछ। एक प्रकाशनमा, हिज्जे त्यस देशले प्रयोग गरेको प्राथमिकताको अनुरूप हुनुपर्छ।
आवधिक तालिकामा तत्वहरूको आकार
सामान्य एनिन्स टेबल र सूत्र सूची
Darmstadtium तथ्य - तत्व 110 वा डी
10 हेलीम तथ्यहरू
पहिलो 20 तत्वहरूको सम्झना कसरी गर्ने
शीर्ष 10 समुद्री5गीत
डीन कोरल र ह्यूस्टन मास मर्डरहरू
ल्याण्ड बायोमको बारेमा 10 तथ्यहरू
ब्रान्डिन पुल निर्माण विंटेज छविहरु मा
अनियमित फ्रेन्च Verb 'Se Souvenir' ('Remember to') लाई पराजित गर्नुहोस्
रसायन विज्ञान मा प्रभावक्रम परिभाषा
प्रतिनिधि कलाको परिचय
बाइक जर्सी समीक्षाहरू
डेल्फीमा टाइप गरिएका प्लास्टन्टहरू बुझ्दछन्
एक महल र कैथेड्रल भूकंप पछि
सोफी जर्मेन को जीवनी
क्या टोरिन रेड बुल मा वास्तव मा बुल सेमे देखि आउँछ?
पछिल्लो 300 वर्षको सबैभन्दा प्रभावकारी आविष्कार
कसरी फाइबर अप्टिक्सहरू चिनिन्थ्यो
सीमाप्यान उदाहरण कार्यक्रम
विश्वयुद्ध म र ब्रेस्ट-लिट्स्कको संधि
फ्रेंच अतीत Imperative - Impératif passé
जापान र युरोपमा सामन्तवाद
नेलसन उपनाम अर्थ र पारिवारिक इतिहास
55 ईसा पूर्व 450 रोमन ब्रिटिश टाइमलाइन
कसरी ब्लुप्रिन्ट पेपर बनाउनुहोस्